Home » Lahatsoratra farany farany » culinary » 2021 Top 10 Hotspot Global Foodie erantany naseho
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • culinary • Kolontsaina • Hospitality Industry • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • fiantsenana • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Ny sakafo ankafizinay amin'ny fialantsasatra dia iray amin'ireo antony maro tianay ny dia.
Aiza no toerana tsara indrindra ho an'ireo mpitia sakafo?
Aiza ny toerana tsara toerana misy kintana sy sakafo an-dalambe ary toerana mafana vegan an'i Michelin?
Ny manam-pahaizana dia nandinika tanàna lehibe eran'izao tontolo izao noho ny anton-javatra maromaro, anisan'izany ny trano fisakafoanana misy kintana Michelin, karazan-tsakafo azo alaina, toerana fisakafoanana an-dalambe, ary% an'ny trano fisakafoanana vegan / vegetarian.
Manomboka amin'ny sakafo eny an-dalambe amin'ny tsena vahiny feno olona ka hatramin'ny mahandro sakafo any amin'ny trano fisakafoanana misy kintana Michelin, ny sakafo ankafizinay amin'ny andro fialantsasatra dia iray amin'ireo antony maro tianay ny dia.
Fa aiza no toerana tsara indrindra ho an'ireo mpitia sakafo? Ary aiza ny toerana tsara indrindra misy kintana Michelin, sakafo an-dalambe ary toerana mafana vegan?
Ny manam-pahaizana momba ny indostrian'ny dia dia nanadihady tanàna lehibe eran'izao tontolo izao noho ny anton-javatra maromaro, anisan'izany ny trano fisakafoanana misy kintana Michelin, karazan-tsakafo azo alaina, toerana fisakafoanana an-dalambe, ary% ny trano fisakafoanana vegan / vegetarian mba hampahafantarana ny toerana tsara indrindra ho an'ny sakafo fisakafoanana.
Ny tanàna tsara indrindra eto an-tany ho an'ny sakafo:
Eo amin'ny toerana voalohany misy ny tanàna tsara indrindra eto an-tany Bern, Soisa izay nahazo isa 6.34. Bern dia nahazo isa betsaka tamin'ny isan'ny trano fisakafoanana Michelin Guide misy ao an-tanàna isaky ny mponina 100,000 XNUMX ary manana safidy sakafo avo lenta ho an'ny haben'ny tanàna.
Na eo aza ny habeny bitika, Luxembourg City no toeram-pisakafoanana fahazoana sakafo faharoa tsara indrindra any, rehefa nahazo isa 6.30. Ny renivohitry ny firenena mitovy hevitra dia ivon-toerana fisakafoanana tsara sy sakafo any an-toerana, ka aza hadino ny mieritreritra azy io amin'ny fitsaharan'ny tanàna eropeana manaraka.
Bruges, mamono ny tian'i Florence sy Venice ho amin'ny toerana fahatelo, dia toerana tsara hitsidihana ny sakafon-tsakafo mamy. Ny waffles sy ny sôkôla izay malaza amin'i Belzika dia samy azo jerena amin'ny vola be manerana ny tanàna.